Taliye Ciidan oo ka Bad-Baaday isku Day Dil oo Lagu Doonayey in la khaarajiyo iyo Shabaab Falkaasi loo Soo Qabtay
Home Somali News East Africa Gudoomiyaha W/weyn oo xalay dil ka bad-baaday
Gudoomiyaha W/weyn oo xalay dil ka bad-baaday
Gudoomiyaha degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabellaha hoose Cumar Cali Cadoow ayaa sheegay in qarax bambaano xalay kooxo hubeysan ku weerareen fariisin ciidamada dawlada ku lahaayeen magaalada Wanlaweyn.
Qaraxa oo ahaa nuuca gacanta laga tuuro ee F1-ta loo yaqaano ayaa waxa la sheegay inay khasaaro kasoo gaartay ciidamo katirsan kuwii lala beegsaday waxaana la sheegay in howlgal sidoo kale ciidamadu sameeyeen kadib qaraxa dad badana lagu soo qabtay.
Gudoomiyaha degmada Wanlaweyn ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi wax khasaaro ah geysan islamarkaana uu shaaca ka qaaday in howlgalkii la sameeyey sidoo kale lagu soo qabtay rag shabaab ahaa oo lagu tuhmayo qaraxii xalay ciidamada lala beegsaday.
Sargaal la hadlay idaacada Andalus ee shabaabku leeyihiin waxa uu sheegay inay qaraxii wanlaweyn xalay ka dhacay uu ahaa mid aad uxoogan askar badana ay ku dileen sida uu hadalka uyiri.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada dawlada somaliya katirsan qarax lala beegsado waxaana shabaab ay sheegeen inay sii kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada kusugan deeganada sh/hoose.